Qalabka Dab-demiska & Qaybaha dayactirka Soo-saareyaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshadaha Dabka & Qalabka Dayactirka
Aluminium / Naxaas Storz Dabka Isku-xidhka tubbada iyo Miiqalka Qalabka Dab-demiska
Biiyaha Tubbada Dab-demiska iyo Heerka Isku-xidhka: Jarmal \_ Mareykan \_ Ruush \_ BS Waxyaabaha Aluminium ama Dhexroor Brass (mm) DN50 DN65 Cadaadiska Shaqada 1.6Mpa Cadaadiska Cadaadiska 2.4MPa Laheli Karo Biyo Nadiif ah oo Dhexdhexaad ah, Xumbo isku qasan Dareeraha Dabka Biiyaha Nozzles Model Isku Xidhka Ballaca Qaybta biiyaha Dhabarta Lagu Qiimeeyay cadaadiska socodka Range QZ3.5 / 5 DN50 (mm) 16mm 0.35Mpa 5L / S> 25m QZ3.5 / 7.5 DN65 (mm) 19mm 0.35Mpa 7.5L / S> 28m
Qalabka tuubbada birta jeexjeexan ee birta ah iyo isku-xidhka / isku-xidhka / xajinta / tiknoolajiyada / tiknoolajiyada farsamada leh
Magaca Adag oo isku-laabmi kara, suxulka, tee, iskutallaabta, soo-dejiye, koofiyad, teknooloji farsamo, iskutallaab farsamo, adabtarada flange Standard ANSI, ASTM, ISO Size 1/2 ″ -12 ″, DN15-DN500 Waxyaabaha Ductile iron QT450 Finish, Epoxy ama Galvanization, Dacromet Approval FM / UL / CE Isticmaalka 1. Nidaamka damiya otomaatiga ah ee ilaalinta dabka dhismooyinka ganacsiga, madaniga iyo degmada sida biyo bixinta, gaaska keena, kuleylka keena, iwm. 2. Nidaamka dhuumaha warshadaha ee maraakiibta, miinada ...
Si ballaadhan ayaa loogu isticmaalay nidaamka damiya otomaatiga si loogu ilaaliyo dabka dhismooyinka ganacsiga, madaniga iyo dawlada hoose. Sida, xafiiska, dugsiga, jikada iyo bakhaarka; Ku shaqee heerkulka xasaasiga ah; Noocyada kaladuwan ee la doorto; Si fudud loo rakibo loona isticmaalo. Astaamaha iyo Waxqabadka Moodal FESFR dabka damiya Waxyaabaha Naxaas, dahaadhka chrome Nooca Toosan / Jilicsan / Horizontal Sidewall Dhexdhexaad caadi ah (mm) DN15 ama DN20 Isku xidhka dunta R1 / 2 ″ ama R3 / 4 ″